एक विशेष क्षेत्र पृथ्वीमा छ: एशिया को northernmost किनारा र अमेरिकी महाद्वीप को उत्तरी भाग, साथै आर्कटिक मा द्वीप क्षेत्र, को ध्रुवीय क्षेत्र सीमाहरु संलग्न।
आर्कटिक मरुभूमि को क्षेत्र के हो? सबै को पहिलो, यो त्यहाँ मौसम मा कुनै स्पष्ट विभाजन छ जहाँ विशेष जलवायु, छ। त्यहाँ बस जाडो, ध्रुवीय राती माइनस चिन्ह पचास दस बीच र डिग्री fluctuating, तापमान नियन्त्रण संग विशेषता छ जो, र ध्रुवीय दिन धेरै छोटो गर्मीयाम छ र तापमान को थर्मामीटर मा शून्य चिन्ह भन्दा बढी छैन।
आर्कटिक मरुभूमि क्षेत्रमा विशिष्ट भू-भाग छ: बरफ र हिउँ भारी द्वीप क्षेत्र समेटेको छ। Franz Josef को द्वीपसमूह बरफ ढाकिएको असी सात प्रतिशत, Novaya Zemlya उत्तरी द्वीप मा - चालीस प्रतिशत, र Ushakov द्वीप लगभग पूर्ण icebound। Severnaya Zemlya (द्वीप) चालीस पाँच प्रतिशत गर्न बीस-दुई बरफ ढाल द्वारा कवर छ।
मरुभूमिमा को रूसी आर्कटिक क्षेत्र मा चरम दक्षिण उत्तरी सबैभन्दा बिन्दु (Franz Josef भूमि) बाट क्षेत्र समावेश (Wrangel द्वीप), द्वीप Novaya Zemlya, नयाँ साइबेरियन द्वीप को, उत्तरी भूमि, को Taimyr प्रायद्वीप को सरहद र यो क्षेत्र भित्र स्थित आर्कटिक समुद्र।
आर्कटिक मरुभूमि क्षेत्र हिउँ र icebound सबै वर्ष दौर ढाकिएको। वर्षा यहाँ धेरै विरलै पर्छ। आफ्नो वार्षिक दर 200-300 मिलिमिटरमा बराबर, र तिनीहरूले हिउँ र चिसो द्वारा मुख्य रूप प्रतिनिधित्व छन्। आर्कटिक को जलवायु बलियो हावा, बारम्बार बाक्लो कुहिरो र उच्च बादल द्वारा exacerbated मरुभूमिमा।
धेरै हदसम्म समान टापुहरूमा को राहत। यो घरेलू क्षेत्र मा तटीय क्षेत्रमा र उच्च पहाड मा एक सपाट सरल छ। Monotonous समतल राहत मात्र नयाँ साइबेरियन द्वीप को विशेषता छ। पूर्व सोभियत संघ को आर्कटिक क्षेत्रमा को द्वीप मा, स्पेस लगभग पचास-छ हजार वर्ग मीटर बरफ को एक क्षेत्र हो। दुई सय र Franz Josef भूमि - - एक सय मीटर बरफ पाना मोटाइ नयाँ धरती, पृथ्वी उत्तर तीन सय बराबर छ। permafrost अधिकतम क्षमता (को Taimyr प्रायद्वीप को उत्तर) पाँच सय मीटर भन्दा बढी छ।
के वनस्पति को मामला मा आर्कटिक मरुभूमि क्षेत्र चकित सक्छ? खैर, यो तिनीहरूले permafrost क्षेत्रमा अवस्थित कि मात्र वास्तवमा अचम्मको छ। बिल्कुल, यो क्षेत्र वनस्पति गरिब र monotonous छ रूपमा, मरुभूमि भनिन्छ। संयंत्र आवरण भताभुङ्ग छ, र कुल कोटिंग साठी-पाँच प्रतिशत भन्दा बढी छैन। र द्वीप (पहाड, पहाड) को भित्री भाग प्रतिशत कुनै थप तीन भन्दा ढाकिएको छ। क्षेत्र को वनस्पति mosses, lichens (मुख्य रूप crustose), शैवाल प्रतिनिधित्व छ। आर्कटिक मा फूल बिरुवाहरु प्रस्तुत blackgrass अल्पाइन, आर्कटिक pickerel, buttercup, kamenolomkoy हिउँ, आर्कटिक अफीम। उच्च बिरुवाहरु को तीन सय र पचास प्रजाति एक आर्कटिक टापु वनस्पति हो, जो को प्रकृति एकदम दक्षिण उत्तरी भाग मा फरक छ।
यदि उत्तरी भाग को Taimyr प्रायद्वीप को नयाँ साइबेरियन द्वीप - - दक्षिण, घाँस-मश आर्कटिक मरुभूमि द्वारा विशेषता छ घरबारविहीन मरुभूमि को आगमन संग shrub-मश मा बदलिएको छ को ध्रुवीय Willow र saxifrage। तर पनि shrub-मश आर्कटिक मरुभूमि द्वारा प्रदान दक्षिण को बरफ क्षेत्र, - यो ध्रुवीय र आर्कटिक Willow र Dryads संग राम्ररी विकास shrub पत्र छ।
कारण कम वनस्पति उत्पादकत्व Fauna आर्कटिक मरुभूमि क्षेत्र धेरै गरिब छ: Lemmings र आर्कटिक Foxes, ध्रुवीय भालू र केही ठाउँमा reindeer, walruses र छाप। ग्रीनल्याण्ड मा musk गोरु पाउन सकिन्छ। को गर्मी मा चट्टानी तट - उपनिवेश नेस्टिङ seabirds एक ठाउँ। Loon र सामुन्द्रिक चरो, guillemot र कालो guillemot, हांस र, को पाठ्यक्रम, हिउँ उल्लू बर्फीले उजाड सबैभन्दा कठिन अवस्थामा बाँचिरहेका चराहरूले राज्यको प्रतिनिधित्व गर्दछ।
फाइबर अप्टिक्स र यसको आवेदन
क्रिसमस रात को प्रार्थना। षड्यंत्र र प्रेतविद्यासम्बन्धी
सपना व्याख्या। किन धोखा को सपना?
घातक wolfberry - बच्चाहरु को हेरविचार